पश्चिमोदय बचत तथा ऋण सहकारीको आठौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न - Nature Khabar Complete Nature News
पश्चिमोदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले आफ्नो स्थापनाको आठौं वार्षिक साधारणसभा भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ ।
सहकारी विभागका अधिकृत शिवजी भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यमा शनिबार डिभाइन बैङ्क्वेट कालिमाटीमा भएको साधारण सभामा दुई सयभन्दा बढीको उपस्थिति रहेको थियो । अतिथिका रुपमा सुरेश प्रसाद अग्रवाल, राजकुमार तामाङ, घनश्याम रौनियार, सागरमणी ढुंगेल, राजकुमार श्रेष्ठ, केदार उप्रेती, ओम कुमार प्रधान, रत्न बिक्रम तुलाधर लगायतलाई आमन्त्रण गरिएको थियोे ।
सुरुमा संस्थाका सञ्चालक चन्द्र बहादुर बुढाले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने सपना खड्का, विष्णु पराजुली र दीपा अर्यालले स्वागत गीत गाए । देशको आर्थिक क्रान्तिका लागि लड्ने शहिदहरुप्रति मौनधारण समेत गरिएको थियो ।
संस्थाका सचिव सुष्मा सापकोटाले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिईन् । लेखा सुपरिवेक्षक नवीन प्रधानले भने आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।
कार्यक्रममा अतिथिहरुलाई मायाको चिनो दिनुका साथै असल बचतकर्ताका रुपमा मोहन अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, त्रिलोप्चन अग्रवाल, राजेश कुमार अग्रवाल लगायतलाई प्रशंसापत्र वितरण समेत गरिएको थियो । सभामा संस्थाको तर्फबाट असल तथा उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा ३ जनालाई पुरस्कृत पनि गरिएको थियो । रिसिप्सनिष्ट अनिता रामदास, बजार सुपरभाइजर रेस्मा खत्री र सक्रिय सदस्यको रुपमा सुष्मा सापकोटालाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो ।
सहकारी विभागका अधिकृत शिवजी भट्टराईले केही सहकारीको नराम्रो कामले गर्दा राम्रा सहकारीलाई पनि असर पर्ने गरेको बताए । उनले भने “काठमाडौंमा धेरै सहकारी भएका कारण पनि सहकारीबिच नै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।” उनले पश्चिमोदयमा ढुक्क भएर बचत गर्न आग्रह समेत गरे । संस्थाका अध्यक्ष देवराज न्यौपानेले सबै कार्ययोजनाहरु पारित गर्नुका साथै उपस्थितलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमको समापन गरे । कार्यक्रम सञ्चालन भने बल बहादुर थापा मगरले गरेका थिए ।
एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने नारा रहेको पश्चिमोदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को मुख्य कार्यालय न्युरोड धर्मपथमा रहेको महाबौद्धमा शाखा कार्यालयसमेत रहेको छ ।